Nitrile परीक्षा दस्ताने
Vinyl परीक्षा दस्ताने
डिस्पोजेबल सर्जिकल मास्क (५१० के)
Level2 मेडिकल फेस मास्क
Level3 मेडिकल फेस मास्क
Iir सर्जिकल फेस मास्क (CE) टाइप गर्नुहोस्
डिस्पोजेबल आइसोलेशन गाउन
मेडिकल सर्जिकल गाउन
डिस्पोजेबल मेडिकल आइसोलेशन गाउन
कम्पनी (Suqian, Jiangsu) मा आफ्नो दस्ताने कारखाना उत्पादन लाइनहरु लाई स्थापित गरीएको छ। हामी उत्पादन र डिस्पोजेबल चिकित्सा nitrile परीक्षा दस्ताने (पाउडर मुक्त) nitrile परीक्षा दस्ताने बेच्न। हाम्रो कम्पनी को नारा सही काम गर्न मा ध्यान केन्द्रित गर्न को लागी हो। हामी बलियो उत्पादन क्षमता र प्रतिस्पर्धी मूल्य छ। त्यसैले हामी ग्राहकहरु को आदेश को समय मा वितरण ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ। हामी "गुणस्तरीय जीवन हो, अन्तहीन ग्यारेन्टी को रूप मा सेवा सुधार गर्न को लागी ग्राहक लाई जीत को लागी जीत" को व्यापार उद्देश्य को पालन। हामी प्रथम श्रेणी उत्पादनहरु र प्रथम श्रेणी सेवा प्रदान गर्न को लागी हाम्रो सबै भन्दा राम्रो गर्छौं। हामी तपाइँको पोशाक को आनन्द लिने, तपाइँको लिफ्ट को आनन्द लिने मा हाम्रो उद्देश्य हो। हाम्रो कम्पनी क्यानाडा र शेन्जेन, चीन मा शाखाहरु छन्। हामी धेरै चिनियाँ ब्रान्ड मास्क, अलगाव कपडा, अपरेटि clothes्ग कपडा, अक्सिजन मेशिन, खोप को एक धेरै प्रतिनिधित्व गर्दछौं।
हाम्रो कम्पनी को कारखाना उन्नत उपकरण र धेरै जिम्मेवार कर्मचारीहरु छन्, त्यसैले हामी बलियो उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी मूल्यहरु छ, निम्न प्रदर्शन मा केहि चित्रहरु छन्
हात मोल्ड सफाई → हात मोल्ड ओभन ag कोगुलेन्ट ट्यांक → ओवन → लेटेक्स टैंक १ → ओभन → लेटेक्स ट्यांक २ → ओवन → पानी धुने → ओभन → कर्लि→ → मुख्य ओवन → कूलिंग → क्लोरीन वाशिंग ट्यांक → धुने ut तटस्थ → धुने → पु टैंक अन्तिम ओवन → पूर्व रिलीज → Demoulding → निरीक्षण → प्याकेजि → भण्डारण → शिपिंग
हाम्रो दस्ताने १० भन्दा बढी देशहरुमा प्रयोग गरीएको छ: युरोप: इटाली, जर्मनी, फ्रान्स, लिथुआनिया, स्विट्जरल्याण्ड, स्वीडेन, आदि; एशिया: जापान, मलेशिया, आदि;
ओशिनिया: अष्ट्रेलिया; अमेरिका: अमेरिका, ब्राजील, आदि अफ्रीका: दक्षिण अफ्रिका, मलावी, आदि निम्न हाम्रो साझेदारहरु मध्ये केहि को एक प्रदर्शन हो।
Q तपाइँ किन हामी बाट किन्नु पर्छ र अन्य आपूर्तिकर्ताहरु बाट?
एक हाम्रो योग्य सामग्री, योग्य उत्पादनहरु, प्रतिस्पर्धी मूल्यहरु र व्यावसायिक उत्पादन लाइनहरु।
Q तपाइँको व्यापार शर्तहरु के हो?
एक EXW, एफओबी, CFR, CIF हाम्रो साझा व्यापार शर्तहरु छन्। यदि आवश्यक हो, तपाइँ DDP वा DDU प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
Q तपाइँ OEM स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ?
एक हाम्रो कारखाना OEM स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ, कृपया हामीलाई तपाइँको अर्डर को विवरण संग प्रदान गर्नुहोस्। हाम्रो उत्पादन विभाग को विकास र हाम्रो विशेष आवश्यकताहरु अनुसार उत्पादन हुनेछ।
Q तपाइँ वितरण भन्दा पहिले सबै सामानहरु परीक्षण गर्नुहुन्छ?
एक हो, हामी एक सख्त पूर्व निरीक्षण प्रक्रिया ढुवानी भन्दा पहिले छ। हामी उपस्थिति, भौतिक र कार्यात्मक स्थिति सामान को जाँच। सबै सामानहरु लाई सबै निरीक्षणहरु पास गर्नु अघि उनीहरु लाई बजार मा पठाइन्छ।
Q तपाइँ नमूनाहरु बाट उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ?
एक हो, हामी तपाइँको नमूनाहरु वा कुनै विशेष आवश्यकताहरु अनुसार हाम्रो उत्पादनहरु लाई अनुकूलित गर्न सक्छौं।
Q नमूना नीति के हो?
A हामी केहि नमूनाहरु प्रदान गर्न सक्छौं कि स्टक मा छन्। जे होस्, क्रेताहरु ढुवानी लागत र कर्तव्य र कर तिर्नु पर्छ।
Q वितरण समय के हो?
एक सामान्यतया, 7-10 दिन पछि भुक्तानी। सही वितरण समय वस्तुहरु र मात्रा तपाइँ आदेश मा निर्भर गर्दछ।
Q प्याकेजि conditions्ग सर्तहरु के हुन्?
एक सामान्यतया, हामी रंगीन बक्सहरु र हाम्रा ब्रान्ड नाम संग डिब्बाहरु मा हाम्रा उत्पादनहरु प्याकेज। यदि तपाइँ एक कानूनी रूपमा दर्ता पेटेंट छ, हामी तपाइँको प्राधिकरण को पत्र को रसीद मा यो रंग बक्स मा थप्न सक्छौं।
Jiangsu Jinlian मेडिकल टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड हामी उत्पादन र डिस्पोजेबल मेडिकल nitrile परीक्षा दस्ताने (कुनै पाउडर) nitrile परीक्षा दस्ताने बेच्न। हामी बलियो उत्पादन क्षमता र प्रतिस्पर्धी मूल्यहरु छ, त्यसैले हामी समयनिष्ठ वितरण ग्यारेन्टी।
Jiangsu Jinlian मेडिकल टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड
अंग्रेजी ： +8613552231037
चीनी ： +8613552231037